Afọ 15 nke "Kostroma poteto". Atụmatụ - ọrụ ọhụrụ - magazin "Usoro nduku"
Mọnde, Machị 8, 2021
Afọ 15 nke "Kostroma poteto". Atụmatụ - ọrụ ọhụrụ
LLC "Kostroma Potato" bụ otu n'ime nnukwu mkpụrụ nduku na mpaghara Kostroma. N'afọ a, ụlọ ọrụ ahụ gbanwere afọ 15. Anyị na onye isi ya, Alexander Pilipchuk, na-ekwurịta banyere nsonaazụ ndị rụzuru n'oge a na otu Kostromskoy Potato si ebi taa.
- Alexander Alekseevich, gwa anyị ntakịrị gbasara akụkọ ihe mere eme nke akụnụba.
- E hiwere ụlọ ọrụ na 2005. Na mbu, ọ jere ozi dị ka nnwale na saịtị mmepụta maka ụdị ozuzu nke ụlọ ọrụ German Norika. Mpaghara Kostroma dabara adaba maka imepụta ugbo mkpụrụ dịka otu n'ime mpaghara kachasị mma maka ọnọdụ okike na ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ phytosanitary. A haziri mmepụta ahụ na nsonye nke ndị ndụmọdụ Europe, na-eji teknụzụ kachasị ọhụrụ na nke kachasị elu. Nke a bụ otu ụzọ mkpụrụ osisi izizi nke Gala na Vega siri tolite na ngalaba Kostroma.
Na nmalite izizi ahụ, arụrụ ọrụ bụ naanị hekta iri ise. A na-akụ nduku bu ihe omumu omumu saiti a. Ugbu a, a na-emekwa ihe n’ugbo ahụ n’ime mkpụrụ izizi, anyị na ndị ọrụ obere obere arụ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ ekenyelarị hekta 50 nke mkpụrụ nduku.
- N'ụzọ doro anya, ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ahịa?
- Anyị na-emepụta ngwaahịa dị elu, nke a nwere ike ikwenye site n'eziokwu ahụ taa na ugbo a na-arụkọ ọrụ mgbe niile na ndị ahịa na-achọsi ike: anyị na-eto nduku maka Lam Weston Belaya Dacha LLC, HZ PSC Sadokas JSC, Stet Rus LLC ".
Nke ozo bu na ugbo anyi nyere ikike Norika poteto. Productionlọ ọrụ mmepụta nke ọ bụla nwere ngwaọrụ nke ọgbara ọhụrụ. A na-anwale ma mkpụrụ akụ niile natara na ule maka nje na nje na ụlọ nyocha amara.
- Afọ abụọ gara aga enweela ihe ịga nke ọma maka ndị na-akụ mkpụrụ nduku Kostroma (n’ihe gbasara ọnọdụ ihu igwe), enwetala ihe ubi mara mma.
You kwenyere n'echiche a?
- Ọ bụchaghị. Afọ adịghị mfe, dị ka mgbe niile n’ọrụ ugbo. Enwere nsogbu ndị a ga-edozi, ma ghara inwe olileanya maka ọdịmma. Mana enwere ike iburu n'uche na ndị ọkachamara anyị emechala usoro agrotechnical niile n'oge, ihu igwe adịghị ada n'oge ọ bụla dị mkpa, nsonaazụ ahụ karịrị atụmanya: nkezi mkpụrụ na 2019 nọ n'ogo nke 50 t / ha.
- Enwere ndị ọkachamara zuru oke n’ugbo ahụ?
- O di nwute, ihe gbasara ndi oru gbasara anyi. Anyị na-adị njikere mgbe niile ịnakwere ndị ọkachamara nwere nkà (agronomists na nke mbụ) n'ime ndị otu anyị dị njikere ịrụ ọrụ na nraranye zuru oke na ala.
Enwere ụfọdụ ihe isi ike na nhọrọ nke ndị ọrụ oge, mana nsogbu a na oru ugbo ugbua na-edozi ya site na imezi ọtụtụ usoro ọrụ. Ya mere, anyị anaghị akwụsịlata ịdabere na ọrụ aka a na-agụghị akwụkwọ, kama anyị na-abawanye arụpụtaghị ihe na nkwụsi ike nke ọma.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ebe a na-ere nduku, nke na-enye ohere ịchekwa mkpụrụ akụ. N’afọ 2017, anyị nyere ndị ọrụ nchekwa ụdị akpa ụdị ihe dịka puku abụọ, puku abụọ, puku iri abụọ na anọ, nke nwere usoro nchịkwa ihu igwe na-akpaghị aka. Anyị na-eme atụmatụ iwu ebe nchekwa ọzọ nwere nkeji friji ka o wee kwe omume ịchekwa mkpụrụ mkpụrụ ogologo oge.
- Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ banyere atụmatụ nke akụ na ụba maka ọdịnihu dị nso?
- Ọrụ ndị dị mkpa anyị debere maka onwe anyị bụ ịbawanye mmepụta nke mkpụrụ nke PP-1 na SSE; mmeba nke uzo di iche iche (iwebata umu ohuru ohuru ndi choro na ahia). Anyị ga-eduzi mgbalị niile na ngwọta ha.
Tags: 2020 # 1Kostroma
Nduku nke ugbo Kostroma
Nkwakọ ngwaahịa maka nduku. Mgbanwe dị nso
Nduku na-eto na mpaghara Kostroma
Banyere imeputa nkpuru osisi
Osisi nchedo ihe ọkụkụ nke nsogbu nke ezigbo nsogbu na atụmanya nke ngwa
"Nduku 2020." Mmetụta na nsonaazụ
Ngalaba Họrọ isi Nchịkọta Ala Akụkọ Mmeri Eku Ndụmọdụ ọkachamara Akụkọ ụwa Australia Eshia America Afrika Europe Oceania News Akụkọ ụlọ ọrụ Mpempe akwụkwọ Mmiri Onye mbu Ntughari Mpaghara Ozi Russia Akụkọ mpaghara Ihe omume Omume / Etu Injinia / Teknụzụ Ọmụmụ The Economy